Ny tantara tsy hita isa an'ny Revolisiona Malta "Rà amin'ny satro-boninahitra" ankehitriny dia mandeha
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Malta » Ny tantara tsy hita isa an'ny Revolisiona Malta "Rà amin'ny satro-boninahitra" ankehitriny dia mandeha
Ny famokarana sarimihetsika Maltese, "Blood On The Crown" (teo aloha "Noise",) miaraka amin'i Harvey Keitel ("Dogs Reservoir," "Pulp Fiction") sy Malcolm McDowell ("A Clockwork Orange," "Mozart In The Jungle") izao dia mandeha amin'ny Amazon Prime, iTunes, Hoopla, InDemand, AT&T, DirecTV ary Google Play.
Blood On The Crown dia manolotra ny kaonty miafina momba ny fomba nitoloman'ny olom-pirenena Maltese ho an'ny fahaleovan-tenany nanohitra an'i Angletera tamin'ny 1919.
Olom-pirenena maltese maherin'ny 115, ny ankamaroan'ny tanora no voaheloka tamin'io herisetra io ary voaheloka higadra mandra-pahafatiny.
Ity horonantsary ity dia ny fandresena nandrasana hatry ny ela an'i Malta hizara amin'izao tontolo izao ny fomba nitazan'ny nosy kely Mediteraneana ny Empira Britanika.
Ny tena tantaran'ny faharetana sy ny voninahitra izay voaroba nandritra ny efa ho 100 taona, notohanan'ny Arts Council of Malta, dia nozarain'ny Entertainment Entertainment monina any Los Angeles.
Miorina amin'ny zava-misy marina, “Ra amin'ny satro-boninahitra”Dia mampiseho ny fitantarana miafina momba ny niadian'ny olom-pirenen'i Malta ny fahaleovan-tenany nanohitra an'i Angletera tamin'ny 1919. Vantany vao tapitra ny Ady Lehibe I, ho fitakiana ny fahaleovantenan'ny fireneny, ny vahoaka maltese avy amin'ny lafim-piainana samihafa, dia niray hina hitarika fikomiana ny anglisy. Ny tafika dia nirahina hamono ny rotaka. Nandriaka ny rà rehefa novonoin'ny tafika anglisy ny mpanao fihetsiketsehana tsy nitam-piadiana. Noho ny fisaronan'ny governemanta britanika ny taona manaraka dia tsy voarakitra an-tsoratra sy tsy fantatry ny besinimaro ny revolisiona. Nahamenatra ny tafika britanika ny hamaroan'ny maty. Olom-pirenena maltese maherin'ny 115, ny ankamaroan'ny tanora no voaheloka tamin'io herisetra io ary voaheloka higadra mandra-pahafatiny. “Ra amin'ny satro-boninahitra”No fandresena nandrasana nandrasana hatry ny ela mba hizara amin'izao tontolo izao ny fomba nahazoan'ny nosy kely mediteraneanina ny fanjakana anglisy.
"Ra amin'ny satro-boninahitra”Dia novokarin'i Jean-Pierre Magro (" Bulgarian Rhapsody "), novokarin'i Pedja Miletic, Aaron Briffa ary notarihin'i Davide Ferrario (" After Midnight, "" We All Fall Down "). Mario A. Azzopardi, Roland Joffe, Konstantin Ishkhanov, Albert Marshall, Shayne Putzlocher dia mpanamboatra mpanatanteraka. Ny mozika dia noforonin'i Alexey Shor.
Aaron Briffa, mpamokatra, dia nilaza hoe: "Tena reharehantsika ny milaza ny fomba nitsanganan'ny nosy kely iray hanoherana ny fanjakana matanjaka indrindra eto an-tany. Ity tantaran'i David mifanohitra amin'i Goliath ity dia nalevina mandraka ankehitriny. ”
Rehefa nanontaniana ny mpanoratra an-tsarimihetsika Jean Pierre Magro hoe avy aiza ny loharanom-pahalalana Malta dia nanamarika izy fa “nanandrana nanarona ny lalan'izy ireo sy nanala ireo porofo ara-tsary ny birao mpanjanatany britanika, mino aho fa sary 3 na 4 ihany no velona. Na izany aza, nisy tatitra roa natao ho loharanom-pahalalana sy boky isan-karazany nosoratan'ireo mpahay tantara Malta nandritra ny taona maro. ”
Raha naneho hevitra misimisy kokoa, ny mpamokatra Pedja Miletic dia nanamarika fa "faly indrindra izy fa ity tetikasa ity dia noraisin'ireo mpilalao sarimihetsika be dia be izay tena sarobidy tokoa tamin'ny fanampiana ilay sarimihetsika ho lasa zava-misy." Nanampy izy fa ny talen'ny Davide Ferrario dia nanamboatra ny fitantarana tamin'io hatsaran-tarehy io. Nanamarika ihany koa i Miletic fa "ny mozikan'i Alexei Shor dia nahagaga tamin'ny famoahana ny toe-tsaina lavorary."
Ny nosy main-tanin'i Malta, eo afovoan'ny Ranomasina Mediterane, dia manana fonenana miavaka indrindra amin'ny lova efa voaorina, ao anatin'izany ny hakitroky UNESCO lova lehibe indrindra amin'ny toerana misy firenena na aiza na aiza. Valletta namboarin'ny Knights of St. John mpiavonavona dia iray amin'ireo fahitana ao amin'ny UNESCO sy ny renivohitry ny kolontsaina eropeana ho an'ny taona 2018. Ny fiarovana an'i Malta amin'ny vato dia miainga amin'ny maritrano vato tranainy indrindra eran'izao tontolo izao, ka hatrany amin'ny iray amin'ireo mahatahotra indrindra an'ny Empira Britanika rafitra fiarovana, ary ahitàna fangaro marobe amin'ny maritrano anatiny, ara-pivavahana ary ara-tafika hatramin'ny vanim-potoana taloha, antenatenany ary tany am-boalohany. Miaraka amin'ny toetrandro mamirapiratra izaitsizy, morontsiraka manintona, fiainana andalam-piainana miroborobo ary tantara 7,000 taona manitikitika, dia misy zavatra maro azo jerena sy atao. Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Malta, tsidiho www.visitmalta.com.
Momba ny Council Council of Malta
Fantatra taloha ho toy ny Malta Council for Culture and the Arts (MCCA), Arts Council Malta (ACM) no masoivohom-pirenena ho an'ny fampandrosoana sy fampiasam-bola amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ny famoronana. Ny lahasa ifotony dia ny famatsiam-bola amin'ny laoniny, amin'ny fanohanana ary fampiroboroboana ireo sehatry ny kolontsaina sy ny famoronana any Malta. Ny Council dia mitantana portfolio famatsiam-bola ho an'ny sehatry ny kolotsaina sy ny famoronana amin'ny alàlan'ny programa famatsiam-bola nasionaly. www.artscouncilmalta.org/pages/the-council/about-us/our-profile
Momba ny fialamboly elektrika
Electric Entertainment dia orinasa mpamokatra, fizarana iraisam-pirenena, ary famokarana aorina any Los Angeles, misy birao any Vancouver, Canada.
Ny fizarazarana fizarana ao an-trano an'ny Electric dia namoaka ilay sarimihetsika nahazo ny loka “Say My Name” notontosain'i Lisa Brenner sy Nick Blood, “Samaritana ratsy fanahy” nataon'i David Tennant sy Robert Sheehan, ary biôlôjika Rob Reiner “LBJ”. Nomena fahazoan-dàlana manokana ihany koa ireo zon'ireo horonan-tsarimihetsika taorian'ny fotoan'ny teatra ho an'i Amazon sy ireo toeram-pivarotana hafa.
Ny andiam-pahitalavitra malaza an'ny Electric, "The librarians" ary "Leverage," izay nihazakazaka nandritra ny efatra sy dimy taona tao amin'ny TNT, dia mbola mizaka ny lisansa rehetra amin'ny sehatra an-trano sy iraisam-pirenena. Amin'izao fotoana izao, eo am-pamokarana i Electric dia mitifitra ny fitohizan'ny "Leverage", "Leverage: Redemption", izay iray amin'ireo fandaharana voalohany voalohany avy amin'ny fahitalavitra IMDb an'i Amazon. Ny andian-tsarimihetsika Electric "The Outpost" dia eo am-pamokarana amin'ny vanim-potoana fahefatra ho an'ny The CW ary "Almost Paradise" dia mandeha amin'ny fahitalavitra IMDb amin'izao fotoana izao taorian'ny filohany WGN America. Ny fizarana Iraisam-pirenen'i Electric's Distribution dia mitantana ihany koa ny zon'ny fizarana sasany ho an'ny tranomboky FilmRise misy anaram-boninahitra toy ny “Ao amin'ny rivotra ny fanovana”Starr Rachel Brosnahan of“ Ilay Mahagaga Maisel Mahagaga. ”